War deg deg ah:Banaanbaxii Muqdisho oo rabsho isku badaley dhimasho & dhaawac – SBC
War deg deg ah:Banaanbaxii Muqdisho oo rabsho isku badaley dhimasho & dhaawac
Banaanbaxyada xoogan ee ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa noqdey kuwa isku badaley rabshado dhiig ku qubtey ka dib markii wiil dhalinyaro ah oo ku dhintey halka sadex kaalena ay ku dhaawacmeen.
Banaanbaxyaasha ayaa saaka hortubtey Hotel Madiina oo ku yaal Xaafada Xamar Weyne halkaasi oo ay degan yihiin xildhibaanada Baarlamanka, hase yeeshee nin ka mid ah ilaalada Hotelka ayaa rasaas ooda kaga qaadey dadkii banaanbaxayye, isagoo diley wiilka yar sadex qof oo kalena dhaawacay.
Warka ayaa intaasi ku darey in banaanbaxyaasha oo ka careysan wiilka la diley ay gudaha u galeen Hotel-ka, iyagoo burburiyey gawaari gudaha iyo banaanka Hotel-ka tiil, waxaa halkaasi la dhigey ciidamo xoogan oo ka socda DFKMG , kuwaasi oo adkeynaya amaanka xildhibaanada oo halis ku jira.
Dhinaca kale hal askari oo ka mid ah ciidamada dawlada ayaa dhintey afar qof oo kale oo ka mid ah banaanbaxayasha ayaa iyaguna ku dhaawacmey dhacdo kale oo ka dhacdey degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho halkaasi oo banaanbax balaaran oo looga soo horjeedo Madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka ay ka dhigeen dad sitey sawirka Ra’isalwasaare Farmaajo.
Warar dheeraad ah SBC kala soco daqiiqad daqiiqad.